Fitaovam-pizahantany vao hita tao amin'ny Niger Delta any Nizeria
Home » Lahatsoratra farany farany » Vaovao Mafana » Vaovao Mafana Nizeria » Fitaovam-pizahantany vao hita tao amin'ny Niger Delta any Nizeria
Birao fizahantany afrikanina • Vaovao Mafana • Kolontsaina • Vaovaom-panjakana • fampiasam-bola • Vaovao • Vaovao Mafana Nizeria • Tourism • Travel Wire News • malaza ankehitriny
Araka ny filazan'ny Bureau Maritime International (IMB), dia 135 ny fakana an-keriny an-dranomasina voasoratra tamin'ny taona 2020 - ary ny 130 tamin'izy ireo dia tao amin'ny Golfa Guinea. Sahala amin'ny fisamborana an'i Mozart, maro tamin'ireo fakana an-keriny ireo no narahina script izay vao mainka nampidi-doza.
Ankoatran'ireto mpitarika fizahan-tany eto an-toerana ireto dia mijery mpanao gazety hanaparitaka sary hafa manasongadina kokoa ity faritra Nizeriana ity hisarika ny fizahan-tany.
Ny Delta Nizera dia ny Delta amin'ny renirano Nizeri izay mipetraka mivantana eo amin'ny Helodranon'i Guinea eo amin'ny Oseana Atlantika any Nizeria.
Ny Delta Nizera dia fantatra amin'ny Piraty, andian-jiolahy mitam-piadiana ary fiparitahan'ny solika, ka mahatonga ny fampandrosoana ny fizahantany ho fanamby.
Ny filoha, Fikambanan'ny mpanao gazety ao Nizeria (NUJ), Ny filankevi-panjakana Bayelsa, Samuel Numonengi dia mahatsapa fa tsy dia tsara ny fanaparitahana vaovao ho toy ny lohan'ny fampandrosoana fizahantany ao amin'ny Faritra Delta Niger.
Indostrian'ny fandriam-pahalemana ny fitsangatsanganana sy fizahantany. Mety ho fotoana mety hitrangan'ny olona ao amin'ny Delta Nizera any Nizeria io. Ny vazivazy amin'ity ezaka ity dia mety ho avy any Jamaika.
Tsy aiza na aiza eto an-tany no mitokona matetika ny piraty noho ny any amin'ny Hoalan'i Guinea, izay misy tantsambo 130 mahery no natao takalon'aina tamin'ny taon-dasa.
Ny fikarohana nataon'ny Union Conservation Union sy ny masoivohon'ny governemanta Nizeriana dia nanondro fa ny salanisa isan-taona tao anatin'ny 50 taona lasa, ny solika nararaka tany Nizeria dia nitovy tamin'ny fiparitahan'ny Exxon Valdez 1989 tany Alaska.
Mampidi-doza kokoa ny faritra noho ny morontsiraka Somalia. Te hanao zavatra momba izany ny EU.
Ny Departemantam-panjakana amerikana dia milaza momba ny dia mankany Nizeria: mandinika indray ny dia any Nizeria noho ny heloka bevava, fampihorohoroana, korontana sivily, fakàna an-keriny, ary asan-dranomasina. Nampitombo ny fitandremana ny fampihetseham-batana noho ny COVID19. Ny faritra sasany dia nitombo ny risika. Vakio ny Advisory momba ny dia manontolo.
Famintinana ny taona 2018 momba ny Faritra Delta Niger sy ny fampandrosoana ny fizahantany:
Ny tena tanjon'ity fandinihana ity dia ny fandinihana ny halatra an-dranomasina sy ny fiantraikany amin'ny fampandrosoana ny fizahantany any amin'ny faritra Delta Nizeriana.
Tamin'ny fisokafan'ny Ivotoerana fandraisana ny fizahan-tany dia nilaza izy fa ny fahitan'ny besinimaro ny faritra izay miorina amin'ny hearsay dia manimba ny fivoarana ara-tsosialy sy ara-toekarena ao amin'ity faritra Nizeriana ity, ary nanindry fa fotoana tokony hanombohan'ny firenentsika ny fitantarany manokana ny tantara hanitsiana ireo lesoka diso momba ny faritra teo aloha.
Ny filoha, Fikambanan'ny mpanao gazety ao Nizeria (NUJ), Ny filankevi-panjakana Bayelsa, Samuel Numonengi dia nanameloka ny fanaparitahana vaovao tsy dia tsara loatra ho toy ny bikan'ny fampandrosoana fizahantany ao amin'ny Faritra Delta Nizera.
Nomonengi dia nanoritsoritra ny tsy fisian'ny antontan-taratasy araka ny tokony ho izy ny lova ara-kolontsaina manan-karena an'ny Ijaws ho fanamby goavana amin'ny fampiroboroboana ny tanjon'ny fizahan-tany.
Nomarihiny fa asa sy orinasa an-tapitrisany no miankina amin'ny sehatry ny fizahan-tany matanjaka sy mandroso. Ny fizahantany dia nanjary hery lehibe amin'ny fiarovana ny lova voajanahary sy kolontsaina, mitahiry azy ireo ho an'ny taranaka ho avy mba hifaly
Nilaza izy fa ny Ivotoeram-pahalalana mpitsidika (VIC), na fantatra amin'ny anarana hafa hoe "Ivotoerana fampahalalana momba ny mpizahatany na ivotoerana fandraisana, dia miorina voalohany indrindra mba hanomezana loharanom-baovao mahasoa ireo mpandeha hanatsara ny fijanonany amin'ny toerana iray notsidihina.
Nomonengi dia nilaza fa ny Komitin'ny fitantanana ny ivon-toerana momba ny mpitsidika Ernest Ikoli dia antenaina hanome tontolo iainana sy mahasoa ho an'ireo mpitsidika mitsidika ny fanjakana voalohany mba hanana fampahalalana tena lehibe momba ny vokatra sy serivisy fizahan-tany, ary koa manome torohevitra momba ny dia na torolàlana momba izany mpizahatany.
Nanazava izy fa ny mpikambana ao amin'ny komity mpitantana ny Ernest Ikoli Visitor Information Center izay voafantina tamim-pitandremana dia antenaina hanomboka hetsika fampiroboroboana ny fizahantany amin'ny alàlan'ny marketing ireo vokatra sy serivisy fizahan-tany eo an-toerana mba hiteraka fiantraikany mivantana amin'ny toekarena eo an-toerana miaraka amin'ny tanjona hanatsara ny fahasalamana ara-pialan-tsasatry ny mponina sy ny mpitsidika.
Raha ny filazan'ny filohan'ny filankevi-panjakana dia ampahany amin'ny filankevi-panjakana Bayelsa an'ny Vondron'ireo mpanao gazety ao Nizeria izany mba hamenoana ny ezaka fampandrosoana ara-tsosialy sy ara-toekarena eo amin'ny fitantanan-draharahan'ny loholona Douye Diri.
Ny komitin'ny fitantanana mpitsidika ernest Ikoli mpitsidika dia manana ny talen'ny Travel Writers Corps ao amin'ny Fiombonan'ny mpanao gazety ao Nizeria, ny filankevi-panjakana Bayelsa, Piriye Kiyaramo ho tale jeneraly, ary ny sekretera ny filankevi-panjakana ao amin'ny NUJ, ny mpiara-miasa Ogio Ipigansi no sekretera.
Ny mpikambana hafa dia misy: ny filohan'ny sendika teo aloha, Tarinyo Akono, sekreteram-panjakana teo aloha, C Stanley Imgbi, Coordinator òf International Institute of journalism (IIJ), Yenagoa Study Center, Roland Elekele ary Business Manager an'ny Silverbird FM Oxbow Lake Swali-Yenagoa, Oyins Egrebindo
Voatendry ihany koa ny General Manager Pe People 'FM, Oxbow-Lake, Lawson Heyford, General Manager an'ny Royal FM, Agudama, Tudor Ayah, ny General Manager an'ny Bayelsa Broadcasting Corporation, Terence Ekiseh, Andriamatoa Tonye Yemoleigha (Radio Bayelsa), Andriamatoa Fiezibe Osain (Ministeran'ny fampahalalam-baovao), Andriamatoa Agidee Theophilus (Televiziona mahaleo tena Africa), Lehiben'ny famoahana ny onja vaovao, Peace Sinclair, Ex-officio nasionalin'ny NAWOJ teo aloha, Beatrice Sikpi ary filoha lefitra zonalin'ny fikambanam-pirenena mpanao gazety nasionaly. (NAWOJ), Ramatoa Timi Idoko.
Namaly izany, Tale Jeneralin'ny Ivon-toeran'ny mpitsidika Ernest Ikoli, mpiara-dia amin'i Piriye Kiyaramo, izay sady filoha lefitra, Travel Writers Corps an'ny NUJ, dia nisaotra ny fitarihan'ny filankevitry ny fanjakana nahita azy sy ireo mpikambana hafa mendrika hanompo, toa azy nampanantena ny hanefa ny mandat nomena azy ireo.
Tsiahivina fa ny ivon-toerana fampahalalam-baovao ho an'ny mpitsidika, izay antsoina indraindray hoe "Ivotoerana fandraisana", dia manome toerana iray hijanonana sy toerana ahafahan'ny mpandeha mifandray amin'ny orinasa sy serivisy eo an-toerana.
Ho fanampin'izany, ny ivon-toeran'ny mpitsidika dia antenaina hanome toerana hiteraka fidiram-bola amin'ny alàlan'ny fivarotana varotra sy asa-tanana any an-toerana ary koa hisamborana sy hamakafaka ireo fampahalalana sy antontan'isa manan-danja momba ny drafitra.
Iray volana lasa izay ny minisitry ny fizahantany sy mpiara-mitantana ny fizahan-tany momba ny fizahan-tany krizy (GTRCMC), Edmund Bartlett, dia nanambara fa efa mandeha ny fifanakalozan-kevitra amin'ny fananganana ivon-toerana zanabolana an'ny GTRCMC any Nizeria. Enga anie ity dia dingana voalohany tsara handefasana ny dia sy fizahan-tany amin'ny iray amin'ireo faritra matanjaka indrindra sy lehibe indrindra eto Afrika.
The Afriafaka miarahaba an'ity hetsika ity any Nizeria ve ny Birao fizahantany ary vonona hanampy rehefa anontaniana.